/ Products / MaR & D Reagents / Arnica Montana upfu
Rating: Category: MaR & D Reagents
Arnica Montana powder ine chepfu painomwa nesimba rakazara, asi inogona kushandiswa sechizoro, gel kana kirimu paganda risingatsemuke kana kutorwa mukati kana yasanganiswa homeopathically. Arnica yakura ikave mumwe wemishonga inozivikanwa zvikuru yehomeopathic pasirese….
Iko hakuna chiyero chakajairwa Arnica Montana poda kana chero imwe dosi inonyanya kukurudzirwa; kune akawanda madosi akasiyana ekushandisa kwakasiyana. Mhedzisiro yakakodzera inofanira kutanga kukurukurwa neyako nyanzvi yehutano, uye iwe unofanirwa kugara uchiverenga chinyorwa chechigadzirwa zvakanaka usati watora chero chinhu.
Homeopathy chirongwa chemushonga icho chinovakirwa pane icho chinonzi "senge-kurapa-senge" musimboti, umo chinhu icho chinonyanya kukonzera zviratidzo mune mumwe munhu ane hutano chinoshandiswa (mune yakaderera kwazvo mishonga) kurapa izvo zvakafanana zviratidzo mukati munhu anorwara. Nekudaro, mune homeopathy, mishonga inowedzera kushanda kana ichinge yanyungudutswa: 200C ine simba kupfuura muyero we6C.